S Pen တစ်ခုစီတိုင်းကို ဘာက တမူထူးခြားစေပါသလဲ။ | Samsung Myanmar
S Pen တစ်ခုစီတိုင်းကို ဘာက တမူထူးခြားစေပါသလဲ။
Note စီးရီးများကို ပို၍ အထင်ကရဖြစ်စေသည်မှာ S Pen တိုင်းက ထူးခြားသလို အသစ်ထုတ်လိုက်တိုင်း ယင်းတို့ကို ပိုပြီးကောင်းအောင်လုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ တာဝန်အပ်နှံထားပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ Note10/10+ ရှိ S Penသည် လက်ရှိတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ၄င်း၌ ယခင် S Pen များနှင့်မတူသည့် သွင်ပြင်များ နှင့် သီးခြားသတ်မှတ်ချက်အချို့ ပါရှိပါသည်။
The Note8 နှင့် Note9 ရှိ S Pen များကို သီးခြားအပိုင်းနှစ်ခုဖြင့် တည်ဆောက်ထားပါသည်၊ Note10/Note10+ တွင်ပါသည့် S Pen မှာ အပိုင်းတစ်ပိုင်းတည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းတစ်ခုသာပါရှိပြီး ယင်းကို ပို၍ ကြာရှည်ကာ ခိုင်ခံ့အောင်လုပ်ပေးပါသည်။
Starting with the Note9 မှစတင်ပြီး S Pen က ဘလူးတုသ် (Bluetooth) LE (စွမ်းအက်နိမ့်) ကို အသုံးပြုကာ ယင်းက ကျွန်ုပ်တို့အား အဝေးထိန်းစွမ်းရည် နှင့် အခြား လတ်ဆတ်သောသွင်ပြင်များကို အသုံးပြုခွင့်ပေးပါသည်။ ဘလူးတုသ်ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် S Pen ကို ရံဖန်ရံခါ၌ အားသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
Note10/Note10+ တွင်ပါရှိသော S Pen က Note9 ၏ S Pen ထက် ပို၍ရှည်ကြာစွာ အားသွင်းဖို့လိုသော်လည်း ယင်းက ပို၍ ကြာရှည်ခံပါသည်။ ဘက်ထရီက ဆက်တိုက်အသုံးပြုလျှင် မိနစ် ၃၀ အထိ ထိန်းထားနိုင်ပြီး အပြည့်အားပြန်သွင်းရန် ၁၀ မိနစ်ပင်မကြာပေ၊ ယင်းက ဘာမှ မကြာပါ။
Note8 တွင် Bluetooth LE ဆက်သွယ်မှုမပါသည့်အတွက် S Pen ကို အားသွင်းဖို့ မလုိုပါ။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် Bluetooth သွင်ပြင်များ
Note9 ကို ထုတ်ချိန်၌ အဝေးထိန်းသွင်ပြင်က လူအားလုံးကို မှင်သက်အံ့သြသွားစေပါသည်။ ယင်းက S Pen ဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ ပါဝါပွိုင့် အစီရင်ခံချက်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဂယ်လာရီကို ဖွင့်ခြင်း နှင့် အပိုဆောင်းအရာများ လုပ်ခွင့်ပြုသည်။
Note10/Note10+ မှ S Pen က ယင်းသွင်ပြင်များကို ပိုဝေးဝေးဆောင်ယူပြီး အဲရ်အက်ရှင်များ (Air actions) ထပ်ဖြည့်ပေးပါသည်။ Galaxy Note10/10+ ၏ S Pen ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး သင့်ဖုန်းအား ဟန်ထား ၆ မျိုး (ဘယ်/ညာ၊ အထက်/အောက်၊ ဘယ်ဝှေ့/ညာဝှေ့) ဖြင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ သုံးစွဲသူအနေဖြင့် အက်ပ်ဖြင့် ဟန်ထားများကို နေရာပြန်ချနိုင်ပြီး လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစီအတွက် စိတ်ကြိုက်ဟန်ထားများအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
S Pen သွင်ပြင်ဖြင့် သင်အသုံးပြုလိုသော အက်ပ်၊ သွင်ပြင်၊ သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုများကို ပြောင်းလဲပါ။
အက်ပ်ကို ပြောင်းလဲရန် အောက်ပါတို့ကို ဖွင့်ပါ
1. အသိပေးချက် ပန်နယ် (notification panel) ကို ဖွင့်ပါ၊ အောက်က်ကို ပွတ်ဆွဲပါ၊ , ‘S Pen air actions’ စာသားအပေါ်တွင် ရှည်ရှည်ဖိခေါက်ပါ သို့မဟုတ် ဆက်တင် အက်ပ် (Settings app) ကိုဖွင့်ပါ၊
အဆင့်မြင့်သွင်ပြင်များ (Advanced features) -> အက်စ ပန် (S Pen) -> အဲရ်အက်ရှင် (Air actions) ကိုဖွင့်ပါ
2. ပန် ကိုခေါက်ကာဆက်ကိုင်ထားပြီး အက်ပ် တစ်ခု သို့မဟုတ် သွင်ပြင်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ အက်ပ်တစ်ုခုစီအတွက် လှုပ်ရှားမှုများကိုပြောင်းလဲရန် အဲရ်အက်ရှင် ဆင်တင် စခရင်ကိုဖွင့်ပြီး အက်ပ်အက်ရှင်များအောက်ရှိ အက်ပ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ ပန် ခလတ် သို့မဟုတ် ဟန်ထားများ (Gestures) အောက်ရှိ အကြောင်းအရာများကို ခေါက်ပြီး လှုပ်ရှားမှုများကို ပြောင်းနိုင်ပါသည်
1 ဖွင့်ရန် အက်ပ်တစ်ခု သို့မဟုတ် သွင်ပြင်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ပါ
2 အက်ပ်တစ်ခုစီအတွက် လုပ်ဆောင်မှုများသတ်မှတ်ရန် အက်ပလီကေးရှင်းကို ရွေးချယ်ပါ
3 ကင်မရာနှင့် မီဒီယာ အက်ပ်များအတွက် လုပ်ဆောင်မှုများကို သတ်မှတ်ပါ
မှတ်ချက် - အခြား Bluetooth ကိရိယာများကဲ့သို့ပင် S Pen ၏ အများဆုံး အကွာအဝေးမှာ ၁၀ မီတာ ဖြစ်ပါသည်။ Note8 ၏ S Pen က အဝေးထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် Air actions များကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
သင့် နှလုံးသားကို တည်းဖြတ် ပြုပြင်လိုက်ပါ
စာရေးရန် သို့မဟုတ် ပုံဆွဲရန် လေဖြင့် အမိန့်ပေး (Air command) မီနူးအသုံးပြုခြင်းကို ဘယ်သူက မကြိုက်ရှိပါမည်နည်း။ ယင်းက Note စီးရီးများ၏ တမူထူးသောသွင်ပြင်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထုို့အပြင် PENUP အက်ပ် ကို ၄င်း၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် အရောင်ခြယ်သည့်စာအုပ်နှင့်အတူ သတိတရရှိပါ။ ယင်းသွင်ပြင်များကို Note8၊ Note9 နှင့် Note10/Note10+ တို့အပေါ်တွင် သင်နှစ်သက်ခံစားနိုင်ပါသည်။
သို့ပါသော်လည်း Note10/Note10+ တွင် တည်းဖြတ်ရန် နှင့် ဖန်တီးရန် ရွေးချယ်စရာများ ယခင်ထက်ပိုပြီး ပါရှိပါသည်။ Video အယ်ဒီတာ အသစ်ဖြင့် ပိုပြီး တိတိကျကျ တည်းဖြတ်၊ စခရင် ရီကော်ဒါ (Screen recorder)့ ဖြင့် ဗွီဒီယိုများအပေါ်တွင် ပုံရေးဆွဲကာ Adobe Rush အက်ပ် အသစ်ထဲတွင် အနုပညာပြောင်မြောက်မှု ရယူနိုင်ပါသည်။ ယင်းတို့အပေါ်မှ ထပ်ဆောင်းပြီး Samsung Note များတွင် သွင်ပြင်သစ်များလည်း ရှိပါသည်။ လက်ရေးကို ပုံနှိပ်စာအဖြစ်သို့ အမြန်ပြောင်းလဲပြီး သင်၏ မှတ်စုများကိုပင် မိုက်ခရိုဆော့လ် ဝါ့ဒ် မှတ်တမ်းများအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းစေနိုင်ပါသည်။